Ka codso boos Viljaskolan - dugsi hoose oo cusub oo ku yaal Angered
Waqtiga qorista, Viljaskolan ma laha jago banaan sanad dugsiyeedka 21/22, laakiin waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad diwaangeliso xiisahaaga sanad dugsiyeedka xiga ama safka. Kahor sanad dugsiyeedka 22/23, waxaan fileynaa inaan si buuxda u bilowno fasalo cusub fasalada preschool, fasalada 4, 6 iyo 7. Haddii ay jirto xiiso weyn, fasallo badan ayaa la bilaabi karaa, markaa ha ka waaban inaad codsato boos iyada oo aan loo eegin darajada ilmahaagu waa inuu bilaabo.
Waxaan balaarineynaa kooxdeena sanadka marka aan sii socono waxaana si tartiib tartiib ah u aqbalidoonaa caruurta iyo dhalinyarada laga bilaabo fasalka barbaarinta ilaa sanadka 9 sano gudahood. Taas macnaheedu waxa weeye in ilmahaagu aadi karo dhammaan dugsiga hoose ee ku yaal Viljaskolan.
Viljaskolan waxa kale oo ay bilaabi doontaa hawl-dugsiyeedka barbaarinta, Viljaförskolan, carruurta u dhaxaysa 1 iyo 5 sano.
Sidee boos looga codsadaa Viljaskolan?
Buuxi foomka codsiga ee aad u timid adigoo gujinaya badhanka cagaaran ee ku yaal bogga hoose ee "Halkan ka codso". Nala soo xidhiidh haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo buuxinta foomka.
Markaad gudbiso arjiga, waxaad heli doontaa jawaab toos ah nidaamkayaga safka. Haddii aadan jawaab helin, hubi in iimaylka uusan ku dhamaan spamkaaga. Haddii aad jawaab u weydo, nagala soo xidhiidh ciwaanka info@viljaskolan.se.
Waxaan tixgalineynaa waxyaabahaas marba marka aad u codsaneysid boos cunuggaaga Viljaskolan:
Darawalka walaalaha ah. Walaalaha codsada Viljaskolan waxay leeyihiin mudnaan.
Taariikhda diiwaangelinta jinsiga
Waa muhiim inaad geliso iimaylka saxda ah iyo macluumaadka taleefanka si aan kuula soo xiriirno. Haddi aan ku soo gaadhi kari weyno marka aanu haysano boos aanu ku bixino, waxa lagaa saari karaa safka
Haddii aad maya ku tiraahdid meel laakiin aad weli rabto inaad safka ku sii jirto, waqtiga safkaaga ayaa dib u bilaaban doona laga bilaabo taariikhda aad diidday.
Codso meel halkan